ताराखोला गापा वडा नं ४ मा नेकपा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवारी सर्वसम्मत ! – ebaglung.com
ताराखोला गापा वडा नं ४ मा नेकपा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवारी सर्वसम्मत !
२०७३ चैत्र ३०, बुधबार १६:४७	Top News, थप समाचार
खगेन्द्र विश्वकर्मा, गल्कोट २०७३ चैत ३० । माओवादी केन्द्र ताराखोला गाँउपालीका वार्ड नम्बर ४ को ३० गते बसेको बैठकले सर्वसहमतीमा अध्यक्षमा जित बहादुर खत्री, महिला तथा दलित धनमायाँ विक, महिला सपनादेवी बुढाथोकी, कुल बहादुर खत्री, ओमबहादुर घर्तीलाई उम्मेरवार बनाउने टुंगो लगाएको प्रेस सेन्टर ताराखोलाका अध्यक्ष पुर्णभद्र निउरेले बताए।
साविक तारा गाविस अन्तरगत वडान ९, ४ र ३ वार्ड मिलेर बनेको ताराखोला गाँउपालिका वडा नम्बर ४ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले सहमतिमा उम्मेदवारी तयार गरेको छ । अन्य वाडैको तुलनामा ताराखोला गाँउपालिकामा अत्याधिक बहुमतले आफुहरु विजयी हुने उम्मेदवार जितबहादुर खत्रीको दावी रहेको छ ।
खत्री विद्यार्थीकाल देखीनै कम्युनिष्ट प्रभावका जित बहादुर खत्री साविक तारा ९ तारागाँउमा जन्मिएका हुन । आई ए उत्तीर्ण खत्री जनयुद्धमा जङ्गल प्रवेश गरेपछी विभिन्न मोर्चामा समावेश भएर १० बर्षे जनयुद्यमा समाबेश भई सशक्त योद्धाको रुपमा काम गरेका थिए ।
सपनादेवी बुढाथोकी सामाजीक व्यक्तिव्व हुन उनी साबिक तारा गाविस ५ गुरुङखोला घर भएकी महिला आन्दोलन र पार्टीको विभिन्न आन्दोलनलाई कहिले गोप्य त कहिल खुल्ला रुपमा सहयोग गर्दै आएकी हुन । धनमायाँ विक पनी तारागाँउ निवासीहुन उनी पनी पार्टिलाई आन्तरीक सहयोग गर्र्दै आएकी हुन ।
कुलबहादुर खत्री साविक तारा ४ अस्मुखी युवा नेता हुन हाल व्यावस्थापन संकाय चौथो बर्षमा अध्यन गर्दै गरेको र अस्मुखी युवा तथा अग्रथी र स्थानीय परिवर्तशील युवा कल्वको सचिव पदमा कार्यरत छन् ।
ओम बहादुर घर्ती साविक तारा गाविसको ३ नम्बर वार्डमा साझा वार्ड अध्यक्ष भई काम गर्दै आउनु भएको र ताराको गरिमामय क्लव नव शृजना युवा कल्व ताराको अध्यक्ष पदमा काम गरि कल्वको स्थापना र विकासमा महत्वपुर्ण भुमिका राखेको अभिभावकीय व्यक्तीत्व हुन् ।
संसदमा हालै दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा राप्रपाको समर्थन !
बुर्तिबाङमा दलित सञ्जालका प्रतिनिधिको क्षमता अभिबृद्धि गर्न दुई दिने तालिम सुरु !